Ndị China na Australia gbara na Maldives
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị China na Australia gbara na Maldives
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ okomoko • Akụkọ Maldives na -agbasa • News • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Njem nleta bụ ụlọ ọrụ kachasị mkpa na Maldives. Ogbugbu nke ndị China abụọ na ndị ọbịa nke Australia taa abụghị akụkọ na-adịghị mma. Ọ dị ka ndị ahụ metụtara abụghị ndị njem nleta.
Mwakpo ahụ mere na Hulhumale Island, nke dịdebere isi obodo Male. Ndị ahụ e merụrụ ahụ nọ n'ọnọdụ dị mma.
Hulhumalé bụ agwaetiti a gbahapụrụ eweghachite nke dị na ndịda North Malé Atoll, Maldives. Emeghariri agwaetiti a na-emebe iwu iji guzobe ala ọhụrụ ọhụụ chọrọ iji kwado ụlọ ndị dị ugbu a na ọdịnihu, mmepe ụlọ ọrụ na azụmaahịa chọrọ nke mpaghara Malé.
Gọọmentị ekwela nkwa itinyekwu nchebe na mba Indian Ocean mara maka bungalows mmiri na ebe ntụrụndụ mara mma.
Ndị uwe ojii na-enyochakwa eziokwu nke vidio a gbasara na soshal midia ebe nwoke nke kpuchiri ihu ya kwuru na ọ bụ ya kpatara mwakpo ahụ, dịka akụkọ ahụ si kwuo.
Nke a abụghị ihe mbụ na-enye nsogbu na mba nke 400,000 ndị mmadụ, ndị bi na ihe karịrị agwaetiti 200, nke na-etu ọnụ maka njem nlegharị anya dịka ụlọ ọrụ ya kachasị ukwuu.
Ndị Maldives na-agbaso iwu iwu iwu.